Somaliland Way Jirtaa Jirina Doontaa. | Biyoguurenews.com
Home Maqaallo Somaliland Way Jirtaa Jirina Doontaa.
Somaliland Way Jirtaa Jirina Doontaa.
Siyaasiyiinta hadalkoodu adag yahay ama ku hadla luuqada aadka u adag ee ka baxsan hanaanka wada lahaanshaha waxaan ku boorinayaa Bismilaah; waxa beryahan saxaafada Somaliland ku soo noq noqonayay hadalo aad u xanaf leh oo sheegaya in aan Somaliland jirin doonin wiixi ka danbeeya 27 july 2015, sidaas darteed siyaasiya dadka codka ka doonaya ee hadana ku hanjabaya Somaliland jiri mayso ma isaga ayaa waalan mise waxaanu ogayn wuxuu ku hadlayaa miisaanka ay leedahay, runtii Somaliland mar xalado tan ka adag ayay soo martay sidaas darteed tani maaha dhibaato wayn oo waa arin xal laga gaadhi karo.
Siyaasiyiinta hadalkoodu adag yahay ama ku hadla luuqada aadka u adage e ka baxsan hanaanka wada lahaanshaha waxaan ku boorinayaa inay aad ugu fiirsadaan hadalada ay bulshada la dhex tegayaan, waayo hadal aan
wanaagsanayni wuxuu keenaa uun qiima dhac ku yimaada qof ku hadlaya.
Sidaas darteed, inta ay siyaasiyiintu ku mashquulsan yihiin hadalada aan wanaagsanayn waa in ay bulshada u keenaan barnamij siyaasadeed oo cad oo dadku ku qanco, oo yaanay noqon xaalkooda ha layska kay doorto, teeda labaad Somaliland maanta uma baahna dacaayado iyo hadalada aan lagu farxin, ee waxaynu u bahanahay siyaasi indheer garad ah oo dadka runta iyo cadaalada ku dhaqan kaasna goorta la heli doono allaa og.
Asxaabta mucaaradka waxan leeyahay walaalayaal bulshada tusa waxaad maagan tihiin ama aad doonaysaan inaad dalka ku maamushaan, ee saxaafada uun hala fadhiyina 27-July-2015, dawlada Somaliland ma aqoonsanin, waayo taasi waxay waji gabax ku nononaysaa hanaanka maamul ee aad la iman doontaan hadiiba aad xilka qabataan, waayo waxaad arki doontaan idinkoon bilba hayn in laydin yidhaahdo ma aqoonsanin waxaa aad wadaan, waayo waa tan aad iminka bulshada kula dhex jirtaana yaaa ah sidaas. Runtii hadalkaasi wuxuu u baahan yahay in aad loo lafa guro oo runtii laga fiirsado waxa la odhanyo.
Guud ahaan Bulsho waynta Somaliland waxan u sheegayaa aan ilaashano nabad galyadeena oo yaanu inagu guurin siyaasi dan gaara lihi, mucaarad iyo muxaafadba, oo aan la xisaabtano cid aynu codkeena siinayno oo ku nidhaahdo aanu kuu codaynee maxaad noo haysaa oo waxqabad muuqda ah, lkn hadii maalinta doorashadu soo dhowaato uun jibbo iyo qabyaalad inta layna dhex dhigo laynagu kala fogaynayo maalinta kursiga uu ku guulaystana aanu ahaynba kii aad soo dooratay walaalayaal waxaas waynu ka daalnay oo waynu fahanay in awrka uun laynagu kacsado e, aan u fiirsano cidd aynu siinayno codkeena.
Xisbiga aynu siinayno codkenu waa in uu ahaadaa xisbi aynu danaheena ka arki karno ee aanu ahayn laakiin hebel oo aanu isku reer nahay ayaa ku jira, haduu doono hebelkaas if iyo aakhiro mid wax ka tari mayo, adigana hab qabyaaladaysan ayuunbaa wax laguugu shubtay.
Bulshow la xisaabtama wixii aad doorateen iyo kuwa aad doran doontaan hadii kale maalin walba waxa ku haysan kii hore ayaa kan dhaamay.
By Mohamed Hamud Ali
Previous articleWasiirka Madaxtooyada somaliland Xirsi cali Xaaji xasan oo Tiro Rag ah oo Kasoo Jeeda Qoyskiisa ah Amar dawladeed Kaga hawlgaliyay Hay,adaha dawlada e Haamaha shidaalka iyo dekada
Next articleDayowga xukuumadda ee ku aadan ka jawaab celinta Sirtii Fakatay
gabadh soomali ah oo markii kowaad boqotay gudoomiyaha barlamanka d d Soomalida Itoobiye